Keijo ma mudan tahay in la daawado? - Muuqaalka Crad
1 Comment on Keijo ma mudan tahay in la daawado?
Waxaa laga soo qaatay "Keijo!!!!!!!!!"
Marka hore aan fahamno waxa Keijo yahay ka dibna waxaan ka hadli karnaa sheekada. Keijo waa ciyaar ay tartamayaasha, oo dhamaantood dumar ah, ay ku qasban yihiin in ay ku garaacaan kuwa ka soo horjeeda jasiirad sabbaynaysa iyaga oo isticmaalaya kaliya naasahooda ama dabada (waan ka xumahay in aan Ingiriisi ahay). Taasi waa sheekadii oo dhan mana ka sahlana taas. Laakiin ma u qalantaa wakhtigaaga muhiimka ah iyo waqtigaaga qaaliga ah? Sii wad akhrinta blog-kan, waxaana hubaal ah inaan ku siin doono fikradayda daacadda ah ee taxanahan.
Waxaa jira jilaa (dabcan) iyo jilayaal kale oo badan kuwaas oo dhamaantood leh farsamooyin ama xirfado kala duwan kuwaas oo ay isticmaali karaan si ay uga caawiyaan dagaalkooda. Inta badan dhamaantood waa kaftan waxaana aad ugu adkeyd in aan helo wax dhab ahaantii asal ahaa. Mid ka mid ah runtii aniga igu dheggan waa "Vakcum But Cannon", waxaad maqli doontaa in badan jidka. Sidoo kale magaca rasmiga ah ee Keijo wuxuu leeyahay qiyaastii 9 calaamado qodis haa 9 ama laga yaabee xitaa in ka badan ma aqaano laakiin waxaan kaliya ugu yeeri doonaa Keijo hadda.
Sheekadu waxay mar horeba si aad ah hoos ugu dhigtay sheeko ay ka mid tahay Keijo oo si sahal ah uma taagnaan doonto anime kale oo caan ah. Sheekadu waxay daba socotaa 18 jir Nozomi Kaminashi marka ay bilawdo safarkeeda si ay u gaadho fasalka sare oo ay u gasho ciyaarta xirfada leh ee Keijo. Way iska caddahay in qoto dheer oo jilaa ah la siiyay inta badan jilayaasha taxanahan, markaa waa inaadan wax gaar ah ka sugin Keijo, oo loo arko waxa sheekada ugu weyni ku saabsan tahay. Waxaa jira wax badan oo ka mid ah waxqabadka Adeegga Taageerada ee keijo, tani run ahaantii kuma ciyaareyso sheekada.
Ujeedada sheekada ayaa ah in Keijo uu ka sare maray ciyaaraha kale sida tartanka eyda iyo ciyaaraha kale ee khamaarka sababtoo ah waxa ay soo bandhigto waana sababta ay u badan yihiin haweenka da'da yar sida Nozomi oo doonaya inay isku dayaan Keijo. Waxa ay u muuqataa in ay aad ugu faraxsan tahay wax kasta oo ay samayso. Nozomi waxay ku biirtay dugsiga garabka bari ee Keijo waxayna bilawday safarkeeda. Iskuulada bari iyo galbeed 10 sano ayay is dagaalameen 10 sano oo xiriir ahna waa la garaacayey garabka bari. Si kastaba ha ahaatee, Nozomi ma awoodi doontaa inay isbedel sameyso?
Marka hore waxaan leenahay 18 jir Nozomi Kaminashi Kaas oo aad uga xun waxa ay qabato. Nozomi waxay jeceshahay inay ku muujiso sida ay dareemeyso ku dhawaad ​​wax kasta oo ay la timaado. Iyadu sidoo kale aad bay u caajis badan tahay oo aan la jeclayn, fikradayda waxay tahay dabeecad weyn oo laga cabsado.
Nozomi aad ayaan uga cadhooday sababtoo ah waxay aad ugu faraxsan tahay wax walba, waxaanan si daacad ah u maleynayaa in Miyata ay sameyn lahayd jilaa weyn oo ka wanaagsan sheekadeeda laakiin wax kasta. Waxay u fududaysay isboortiga Keijo waxayna doonaysaa inay si xirfadaysan ugu raadiso.
Marka xigta waxaan haysannaa Sayaka Miyata oo ka duwan Nozomi ma aha mid aad u hadal badan. Waxay door bidaysaa inay nafteeda ku dhegto oo ay isticmaasho farsamada cusub ee ay abuurto. Iyadu ugu dambeyntii waa jilaa muhim ah oo ku saabsan qaybaha ugu dambeeya ee dagaalka Bariga-Galbeed.
Iyadu waa jilaa muhiim ah waxayna ka kooban tahay 4-ta jilaa ee ugu muhiimsan bilawga. Waxaan dhihi lahaa in ay tahay qof wax yar ka xiiso badan Nozomi in ay ka tagtay fursada nolosheeda ee Judo, si ay u sii wado xirfad Keijo oo xirfad leh tani waa wax aan ka helay mid aad u xiiso badan waxayna ka dhigtay dabeecadeeda mid aad loo jecel yahay. Waxa kale oo ay arrintan la lahayd aabaheed sababtaas awgeed, wuxuu rabay inay samayso Judo oo waxay doonaysaa inay gasho Keijo iwm, waxaa jira muuqaal u dhow dhammaadka halkaas oo uu ku faraxsan yahay tan.
Runtii waa inaan raadiyaa magaca jilayaashan, taasi waa sida la illoobi karo iyada. Waxaa soo baxday magaceeda Kazane Aoba wayna caajis badan tahay haddaad i waydiiso. Waxaan u maleynayaa in jilaaga codka iyada uu yahay haweeneyda sameeya Moaka ee ka socota Rosario Vampire. Taas macnaheedu waxa weeye mar kasta oo ay hadlayso waxa aan madaxayga ka maqlayay "Tskune, Tskune waan ku jeclahay Tskune".
Taasi ma ahayn waxa aan ku xasuusan karo iyada, oh maya, waxaad arkaysaa Kazane waxay leedahay awood ay ku akhrido bartilmaameedyadeeda iyada oo loo marayo "farsamada gacanta ee sawirka", taas oo ah waxa kaliya ee iyada ka dhigaya mid xiiso leh fikradayda. Awooddani waxay u oggolaanaysaa inay isticmaasho awoodda qof kasta oo ay taabato, ama hababtay, waa inaan idhaahdaa.
Ugu dambeyntiina, waxaan haynaa madaxa hawada bimbo, si aan la yaab lahayn ayaan magaceeda u ilaaway sidoo kale. Si kastaba ha ahaatee, Toyoguchi ma aha ama Maya sida aan ugu yeeri doono iyada oo fulisa nooca anime ee nooca madaxa hawada bimbo iyo muuqaalkeeda, wada hadalkeeda iyo joogitaankeeda guud waxay ahayd mid aan u adkaysan karin aniga.
Waligay si dhab ah uma aanan ciyaarin dareenka iyada oo dhan taxanahan, laakiin waxaan xasuustaa in farsamadeedu ahayd in dabada (igu raali ahaada waxaan ahay Ingiriisi) waxay ahayd mid aad u qallafsan oo awood u leh inay nuugo weerarada ugu badan ee dadka kale. Mid ka mid ah jileyaasha taxanaha ayaa ku tilmaamaya inay tahay "marsh mellow", taas oo runtii aan macno badan samaynin laakiin dhacdooyinka Keijo midkoodna macno badan ma samaynayo sidaa darteed aan sii wadno sababaha, waa sababta aad halkan u joogto .
Sababaha Keijo ay mudan tahay in la daawado
Nuxurka Adeegga Taageerada
Hadda waxaan aad ugu daacad noqon doonaa oo waxaan ku idhi Keijo asal ahaan waa a adeeg taageeree nooca anime. Hadda haddii aad ogtahay waxa taasi ka dhigan tahay markaas waxaad u badan tahay inaad hore u ogaatay haddii aad rabto inaad daawato Kejio iyo haddii kale. Keijo waxay leedahay qadar aad u badan oo ah ficil adeeg taageere taasna waxay noqon kartaa dhismaha taxanaha oo dhan.
Sheekada Keijo aad bay u fududahay in la raaco maadaama ay asal ahaan ka soo jeedo qaybta kowaad. Waxaa lagu sameeyaa sheeko dhab ah. Sheekadu waxay leedahay bilow cad oo lagu dhammayn karo dareenka nooca ah oo wax runtii nagama foga.
Kejio waxa uu leeyahay jilayaal aad u tiro badan, waxaana igu adkaatay inaan xasuusto dhamaantood (maaha inay ahaayeen kuwo la xasuusan karo). Dhammaantood waxay leeyihiin sifooyin kala duwan kuwaas oo si gaar ah uga dhigaya kuwo gaar ah waxaana kuwan loo adeegsadaa qaab la kasbaday ama la siiyay "farsamo" oo ay ciyaartoydu u adeegsan karaan midba midka kale. Jilayaasha ayaa dhamaantood ka soo kala jeeda kooxo iyo asalyo kala duwan tanina waxay ka dhigaysaa dhamaantood mid xiiso leh dhinacyada qaarkood.
Ka Buuxsan Dhammaan Noocyada Ficil
Wax badan baa jira oo waxaan ula jeedaa ficillo badan oo Keijo ah, tanina waa waxa igu kalifay inaan sii wado daawashada, sababtoo ah hubaal ma ahayn sheekadii igu ilaalinaysay daawashada iyo xitaa ficilka buskudka ah, haddii aad qabato qulqulkayga. Waxa jira dhawr goobood oo dagaal oo xusuus leh oo aan jeclaa intii taxanaha ahayd oo tani way socotay ilaa dhammaadkii.
Midab leh & Soo jiidasho leh
Qaybaha iyo qaabka loo soo bandhigay iyo sawiradooda ayaa indhahaygu qabanayay. Dhab ahaantii, qaabka animation-ku xaqiiqdii maaha wax gaar ah, laakiin qayb kasta waxa loo sawiray hab soo jiidanaya dareenkaaga si aad ugu raaxaysato.
Si Fudud Looga Helo
Keijo aad bay u fududahay in la daawado oo weliba lagu raaxaysto. Kaftanka ayaa aad u xun si kastaba ha ahaatee, waxay kaa dhigayaan inaad ku qosliso, xitaa waxaa laga yaabaa inay u sii simbiriirto majaajilada nooca qolka haddii aad i weydiiso. Laakin ma filayo in dadku ay Keijo ku daawadaan kaftanka, inta badan waxay u tahay dagaalada, gabdhuhuna wax kale ma jiraan.
Sababaha Keijo Aanu U Qalmin In La Daawado
Sheeko Asal Ah Oo Aan Wanagsanayn Si Kastaba
Dhinaca sheekada Keijo waa mid aad u xun in la yiraahdo ugu yaraan. Laakiin waa codadka iyo sida kaftan kasta loo dejiyo ayaa aad u xun. Waxaan ula jeedaa fikradda ah koox dumar ah oo ku dagaallamaya goobta biyaha oo kaliya isticmaalaya dabada ama naasaha ma aha sida saxda ah "Magaalada aad ku nooshahay" heerarka sheeko-sheegid laakiin wali waxay ahayd fikrad asal ah. Sheekadu way fiicnaan lahayd oo tayada kaftanka ayaa kor loo qaaday.
Waxyaabo badan oo Galmo ah
Waxaa laga yaabaa inaad ka warqabto tan laakiin waxaa jira muuqaal galmo badan oo Keijo ah taasna inta badan waxaa ugu wacan habaynta taxanaha guud ahaan. Haddii aadan dhibaato ku qabin galmada sida muuqaallada anime ama guud ahaan markaa waa inaadan dhibaato kala kulmin Keijo. Ma jiraan kuwo aad uga sarreeya laakiin waxay noqon karaan kuwo aad u xanaaqsan mararka qaarkood. Ma ahan qaawanaan buuxa sida Ikki Tousen laakiin hubaal waa ay jirtaa, ha welwelin.
Calaamadaha Tayada Liidata
Jilayaasha Keijo waa kuwo la ilaawi karo oo guud ahaan xun laakiin jilayaasha si fiican looma qorin. Waxa kaliya ee loo isticmaalo in laga dhigo kuwo gaar ah ayaa jira farsamo, bar laga yaabee Miyata, maadaama ay lahayd sheeko-hoosaadka Judo oo aan u maleeyay inay ahayd tallaabo loo qaaday jihada saxda ah. Waxaan jeclaystay xaqiiqda ah in waalidkeed ay soo baxeen aakhirkii, waxay ka dhigtay muuqaalkii ugu dambeeyay mid aad u adag waxayna ka dhigtay sheeko dabeecadeed mid muhiim ah.
Ha ka werwerin ma aha wax weerar ah, waa doqonnimo cad mararka qaarkood. Inta badan wada hadalka ayaa ah mid si liidata u qoran, waxaanan hubaa in ay khaldan yihiin tarjumaadaha qaar sidoo kalena aad u xun marka la eego in aan tan ku daawanayay Funimation. Kaftanka ayaa ah kuwo si liidata loo fuliyo, mana aha kuwo lagu qoslo inta ugu yar. Ku dhawaad ​​dhammaan kaftankii ayaan la ilmooday qaabkii loo fuliyay. Inta badan kaftanka ayaa igu qosli jiray sida ay nacasnimada u yihiin, sida kaftanka "dabada" joogtada ah. Haddii aad jeceshahay kaftanka xun ee ku saabsan jidhka bini'aadamka markaas waxaad yeelan doontaa qarxin daawashada Keijo laakiin haddii aad tahay sida aniga oo kale kaliya ma doonayo in aad ku raaxaysan, xataa haddii aad leedahay wax kaa caawinaya taas.
Faqiir & Qaabka Animation Aan Asalka Ahayn
Habka sawirka Keijo wuxuu ahaa mid aan asal ahayn oo caajis ah, jaleecada koowaadna waan necbahay. Ma jirin wax asal ah ama lagu farxo qaabka loo sawiray. Tani ma noqon doonto dhibaato weyn laakiin marka la barbar dhigo taxanaha sida Bakemonogatari ama Miraha Grisaia. Waxa kaliya ee la dareemay caajis iyo cad, wali la daawado oo la qaadan karo laakiin wax gaar ah ma jiro haddii aad hesho waxa aan ula jeedo.
Waxaan filayaa inay inta badan jilayaasha iyo wada-hadallada hoos u dhigaan Keijo tanina waxay si cad u muujinaysaa sida muuqaallada loo fuliyo inta badan taxanaha. Dadka intooda badan ee daawada anime-kan si kastaba ha ahaatee way rajayn doonaan tan si kastaba ha ahaatee adiga oo tixgelinaya adiga ama Keijo aad jeceshahay ama necbahay. sheekada Keijo waa mid aad u fudud ma aha oo kaliya in la raaco, laakiin si loo fahmo. Kaftanka ayaa ah mid aad u xun, sidoo kale jilayaasha ayaa ah kuwo caajis ah oo aan qoto dheereyn oo aan la sheegin wax xiriir ah oo ay la yeelan doonaan midba midka kale si kastaba ha ahaatee.
Haddii aad galayso ficil adeegga taageere ee bust markaas Keijo adiga ayaa kuu ah sidaan idhi waa ku badan yahay Keijo waana meesha inta badan soo jiidashada ay ka yimaadaan Keijo. Inta badan dadka daawado Keijo waxay u arkaan ciyaar ay haweenka xidhan dharka dabaasha ee daah-furka ah ay ku qasban yihiin inay ka riixaan cayaartoyga kale (oo sidoo kale haweeney ah) garoonka. Taasina waa waxa ay ku soo degto Keijo, wax gaar ah run ahaantii ma jiraan. Taxanaha kale ee kaliya ee aan muujin karo ee la mid ahaa Keijo wuxuu ahaa Haruka Receive. Haruka Receive waxay si qurux badan ula mid ahayd Keijo laakiin maaha galmo ahaan fikradayda, waxay diiradda saartay isboortiga, waana ogahay in taasi tahay waxa Keijo sameeyo.
Waxaan dareemayaa inaadan Keijo u qaadan karin si dhab ah sida aad u malaynayso tani waxay saamayn kartaa habka aan u daawano dhacdooyinka iyo muuqaalada. Fadlan dib u eeg dhammaan sababaha aad u daawato Keijo maadaama aan filayo inay ku soo wargelin doonto sida ugu badan ee mar labaad. Waxaan rajeynayaa in blog-kani uu waxtar u lahaa in uu ku wargeliyo sidii ay ahayd. Waad ku mahadsan tahay akhrinta
Tags: anime animekeijoseries animeseries kiijo kiijoanime kijoseries waa inaauwatchanime waayouwatchkeijo
Pingback: Grand Blue ma mudan tahay in la daawado? - Muuqaalka Crad
Gelitaan Hore Top 10 Gabal Nolosha Anime Si Aad Ulasocotid Funimation
Gelitaanka Xiga Bakemonogatari Miyuu Mudan Yahay In La Daawado?